Date My Pet » 7 Ratsy tarehy fahamarinana About Modern Dating
Mampiaraka dia faritra iray tany amin'ny kolontsaina tandrefana hatramin'ny ela. Na izany aza, ny fiarahana ny amin'izao fotoana izao dia samy hafa be izay nampiasaina mba ho feno 60 taona mandritra ny, 70s, 80s ary na dia 90.
Ny fahatongavan'ny ny Internet sy miaraka aminy ny firongatry ny fiarahana vohikala dia tompon'andraikitra amin'ny ankapobeny izany fiovana. Na dia maro ny zavatra izay ho andro ankehitriny mampiaraka tsara sy mahaliana kokoa (anaty aterineto dia azo antoka fa fiarahana ny iray tamin'izy ireo), demerits fisian'ny tsy azo lavina koa. Ireto ambany ireto ny sasany fahamarinana momba maoderina ratsy tarehy mampiaraka izay hamela anao mba hahafantatra ireo demerits.
1. Efa nanadino ny olona hiresaka tsirairay
Easy fifampiresahana dia iray amin'ireo fanomezana lehibe indrindra fa ny teknolojia dia nanome ny olombelona. Amin'izao fotoana izao, amin'ny fitiavana ny olona hahazo ny hifandray amin'ireny samy izy izy ireo na dia lavitra. Na izany aza, fandrosoan'ny teknolojia izao ihany koa ny finiavana namono olona mba hiresaka.
Eny, ianao no mamaky azy io tsara; ny ankamaroan'ny olona amin'izao andro izao tsy mitady mafy mba hihaino ny feon'ny malalany, andian-dahatsoratra manao ny asa hafatra ho azy ireo. Ahoana ny antso an-telefaonina? Oh, fa tena izay no zavatra momba ny lasa.
2. Ianao no, raha tsy mahalala
Te-hahazo ny fon'ny olona iray? Amin'izao fotoana izao, ny fomba mora indrindra manao izany dia amin'ny alalan'ny satria tsy nahalala. Dia hiseho ho tian'ny mpiara-miasa ny mampiaraka, raha tsy miraharaha. Tato ho ato, saika tsy misy toa liana amin'ny olona liana.
3. Fihetseham-po dia matetika mamitaka
Decoding fihetseham-po dia sarotra hatrany ny olona an'ny taranaka ankehitriny dia sahiran-tsaina. Ny olona izay tsy mba taitra aminao mitondra tena ao amin 'ny fomba sy ny manana fijery mitovy eo amin'ny / ny tava tahaka ny olona izay tena tia anao. Ny ankamaroan'ny olona, amin'izao fotoana izao, efa nanadino ny fomba hanehoana ny fihetseham-po sy ireo mihevitra fa tsara toetra.
4. Money, bola sy ny vola ary avy eo dia tonga tarehiny
Ny filazana etsy ambony dia voalohany indrindra ho an'ny olona marina; ho an'ny vehivavy, izany no ho fomba hafa manodidina (endrika tonga aloha ary avy eo ny vola). Raha afohezina, na ny olona miaraka ianareo dia ho tia anao Miankina amin'ny toerana misy anao no laharana hatrany ireo lafin-javatra roa ireo voakasika. Eny, afa-tsy ireo roa; zavatra hafa rehetra tonga rehefa afaka izany.
5. Zavatra voalamina koa ho tantaram-pitiavana
Tantaram-pitiavana amin'izao andro izao mikarakara hangouts lasa mora loatra. Manao antso an-tariby sy mpamatsy jiro dia hikarakara sakafo ho anao mazava. Izany dia be lefy ny mpiaro ampiasaina iray niaraka tamin'ny drafitra toy izany tany aloha.
6. Fiainana manokana? Inona no fiainana manokana?
Tsy misy na inona na inona tsy miankina ny niaraka ankehitriny. Efa mitondra ny datin 'ny olona iray ny tolakandro, ary amin'ny hariva dia ho hitanareo ny sary ao amin'ny roa aminareo miara-kitihina ny olona hafa ny haino aman-jery ara-tsosialy amin'ny alalan'ny kaonty nanaraka andian-fanehoan-kevitra amin'ny creepy teny. Raha toa ianao ka tsy zatra azy io, tsy an'i taranaka ity.
7. Izany ka nanao hoe: 'Tena mora ny ankehitriny
Fotsiny andinin-teny sy ny mpiara-miasa no hahafantaran'ny olona fa ianao no tsy liana kokoa azy / azy. Indraindray ny fisarahana fotsiny andinin-teny ahitana ny teny iray na roa. Dia namaky ny fifandraisana tokoa fa mora?
Amin'izao fotoana izao, Azo antoka fa ny olona tsy manam-paharetana kokoa sy tsotsotra; tsy fahampian'ny fotoana dia lehibe ihany koa ny demonia. Na izany aza, tsy azo lavina fa mbola te ho tia sy ho tia. Izany, Tsy ela dia tonga ny fotoana mety, rehefa mampiaraka lasa toy ny tantaram-pitiavana, ary mampientam-po toy ny taloha intsony tamin'ny lasa.